Banyere Anyị - Jiangsu Huanyi Industrial Co., Ltd.
Anyị ụlọ ọrụ na-agba mbọ na-amị elu àgwà oyi na-ekpo ọkụ mpikota onu ngwaahịa
Jiangsu Huanyi Industrial Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ teknụzụ ọhụụ. Companylọ ọrụ ahụ etinyewo aka na mmepe nke gel ice pack ngwaahịa maka ịma mma onwe onye / ahụike na ahụike / egwuregwu / egwuregwu ụlọ / nlekọta kwa ụbọchị na-eme ka ọgwụ na-ekpo ọkụ na oyi dị na 2012.
Anyị na-enye ezumike, ọgwụgwọ anụ ahụ na enyemaka mbụ na ndụ, Ngwaahịa na-asambodo na SGS, FDA, OA, REACH, AZO, PROP65, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nyocha BSCI, anyị nwere ahụmịhe jikọrọ LIDL, ALDI, Wal-mart na Disney.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ngwaahịa ire ere dị ka gel ice pack, gel bead mask, nkwojiaka nkwonkwo ụkwụ nkwonkwo ụkwụ ya na ngwugwu ice oyi, sọks ọgwụ oyi, ahịhịa microwave kpo oku, akpa ice, nke nwere ike ịbụ ebe niile
eji na-ekpo ọkụ na oyi na-atụ mpikota onu ọgwụ, egwuregwu Health, nne na nwa na-elekọta, wdg Anyị na-agbaso ụkpụrụ nke "na-aga n'ihu e kere eke na ndị ahịa afọ ojuju" na ikwesị ntụkwasị obi na-atụ anya inye ya na a mpi price maka a ike ndụ.
Anyị nwere ngalaba R & D nke anyị nwere ike mepụta ngwaahịa ndị ahụ dịka echiche gị, igwe na-egbu laser iji hụ na ọdịdị ahụ ziri ezi, mbipụta UV nwere ike ịme ụdị agba dị iche iche, aka ejiri aka mee ka ọ dịrị ndụ maka ngwaahịa gị, ndị ọrụ 120 zara maka nnyefe. Ebumnuche anyị bụ ịnye ngwaahịa dị elu, ọnụ ahịa dị ọnụ ahịa na nnyefe ọsọ ọsọ na ọrụ kacha mma.
Ngwunye ice niile na-aga nyocha nyocha na nyocha onwe onye tupu ngwugwu, gel na-adịghị egbu egbu ejiri akara na PVC, EVA, TPU nwere ike ịwụfu ma ọ bụrụ na ọ dị ọkụ ma ọ bụ nrụgide, nke ahụ adịghị mma maka ahụmịhe ndị ahịa, ụlọ ọrụ anyị na-eme ka ndị a niile nwee ike ịchịkwa, nzaghachi maka ngwugwu ice ọ bụla.
Ekekọrịta mbupụ anyị
Jiangsu Huanyi Industrial Co., Ltd. na-agba mbọ na mmepụta nke elu-edu oyi na-ekpo ọkụ mpikota onu ngwaahịa. The ụlọ ọrụ na-etinye aka na ngwaahịa mmepe, mmepe na mmepụta (usoro dum nwere ike ị drinkingụ mmiri dị ọcha) na ahịa. Site n'ịrụsi ọrụ ike nke ndị ọrụ teknụzụ na ahịa niile, ụlọ ọrụ ahụ enyela ndị ahịa n'ụlọ na mba ofesi ọnụ ọgụgụ dị elu nke ngwaahịa na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ.
Anyị na ngwaahịa na-exported n'ụwa nile, isi mba na mpaghara na- 40% na Europe, 30% na America, 15% na Japan na 5% Korea, na 10% na mba ndị ọzọ ma ọ bụ mpaghara.The ụlọ ọrụ a na-eje ozi ahịa na elu-edu ngwaahịa, ezi uche price, n'oge nnyefe na ezi aha. Anyị ji obi anyị niile na-atụ anya na-akwado ndị ahịa n'ụlọ na mba ọzọ. Site na mgbalị nke ndị ọrụ niile gburugburu ụwa, anyị ga-abụ ụlọ ọrụ na-eduga n'ime ụlọ ọrụ ahụ wee mepụta ọmarịcha ọdịnihu nke ụlọ ọrụ mpịakọta oyi na ọkụ ọkụ!
Mba ndị ọzọ na mpaghara
Bụrụ onye òtù ezinụlọ ebe a, ha nwere ike ịnụ ụtọ ọbá akwụkwọ na ụlọ ọrụ ahụike ka ọ dị mma dịka ngwaahịa anyị!
Mmadụ Bịa na ileta anyị factory ma ọ bụ anyị ụlọ ndò kwa afọ na Fairs na ngosi.
Soro anyị nwee mkparịta ụka, ị ga-ahụ ngwaahịa ngwugwu ice gị kwesịrị ekwesị na oyi na-atụ!